I-china eyenziwe ngetamatisi enkonkxiweyo 210g mveliso kunye nabenzi | Itumato
Uncamathisele iitumato yenye yezinto ezityiwa imihla ngemihla. Ingenza ukutya kube mnandi kwaye kube sempilweni ebantwini. Singenza umgangatho owahlukileyo ngokwezicelo zabathengi kunye nomgangatho womgangatho wentengiso, uncamathiso yitamatisi eqhelekileyo yendalo umbala obomvu, i-100% ngaphandle kwezongezo, zingqindilili kwaye kungekho manzi. Sinokwenza i-GINO esemgangathweni yeetamatato.
"Umgangatho wokuqala" uhlala umgaqo wethu wokuqhubekeka i-tomato paste.
Umzi-mveliso wethu ugubungela ummandla weemitha zesikwere ezingama-58,740, imveliso yangoku yonyaka ziitoni ezingama-65,000, sinemigca yemveliso yeetumato enamathanga ayi-9 kunye nemigca yemveliso yeetumato, enokuthi ibe neemveliso ngeentlobo zokubalula, njenge-70g yeetamatisi ezinkonkxiweyo, i-140g enkonkxiweyo yetumato, I-198g enkonkxiweyo yetumato, i-210g yeetamatisi ezinqatyisiweyo, i-400g yeetamatisi ezinqatyisiweyo, i-800g unama-tomato unamathele, i-830g unamathisele weetamatato enkonkxiweyo, i-850g yamathanga e-tomato, i-tomato unamathele, ubukhulu obukhulu be-4.5kg unamathele wetamatato enkonkxiweyo njl.
Iimarike zethu eziphambili ziphantse amazwe aseAfrika, Middle East, USA kunye namazwe akuMzantsi Melika ngaphezulu kwamazwe angama-75 kunye nemimandla.
Sisebenzisa umatshini ophezulu, umatshini wokupakisha. Iimpahla ziya kugxininiswa ngakumbi kwaye zomile, kwaye ubuninzi beemveliso ziya kulayishwa, sinokugcina iindleko ezininzi kuwe.
Kwaye zonke iinkonkxa zethu ezinombala omhlophe okanye omthubi we-ceramic ngaphakathi ukunqanda ukurusa kunye nokugcina umgangatho olungileyo we-tomato.
1. Sinokubonelela abathengi ngeesampulu ngokukhululekileyo, sifuna kuphela abathengi ukuba bame kwinqanaba lokuhambisa, kwaye yintoni enye, sineakhawunti yethu ye-DHL nge-50% isaphulelo, ungasibhatalela imithwalo kwangaphambili kwaye emva koko sikuthumele iisampulu ngo iakhawunti yethu, eya kuthi isindise iindleko ezininzi kuwe!
2. Ixesha lethu lokuhlawula li-30% yedipozithi kunye nemali eseleyo ekufuneka yenziwe ngokuchasene nekopi ye-B / L, ukuba ngu-L / C, kufuneka siphinde siqwalasele kwaye siqinisekise ukuba ingaba singayamkela na.
Ixesha lokuhambisa: Iintsuku ezingama-30 emva kokuqinisekiswa kwesivumelwano, idiphozithi efunyenweyo kunye nelebheli eqinisekisiweyo
4. Ii-SGS nee-BV zombini zamkelekile, unganxibelelana nazo xa ufuna njalo.
5. IHalal, i-ISO, i-HACCP kunye ne-FDA ziyafumaneka.
6. Sinaye umyili wethu oqeqeshiweyo, onokwenza uyilo luhle kwaye likhawuleze.
Egqithileyo Iitamatisi ezinonkiweyo 70g (2)
Okulandelayo: Iitamatato ezinonkiweyo 400g
Ukunkonkxa i-Tomato Cola
Ubungakanani obahlukeneyo beTomato Cola
Cola kabini i-Tomato Cola
I-Flat Sachet I-Tomato Cola
Umgangatho ophezulu weTamatato Cola
Ingxowa yeTamatato Cola
Utamatisi Cola umthengisi wase China
Utamatisi Cola To Sauce
Ukuncamathelisa iitumato kwiivenkile
Iitamatato ezinonkiweyo 400g